I-Offshore Trust - Izinzuzo, Ukuvikelwa Kwempahla, Izinqumo Nokuqokwa
I-Offshore Trust ye-Asset Protection
Ochwepheshe abaningi bokuvikelwa kwempahla bayavuma ukuthi ukwethenjwa kwe-offshore endaweni ekhethiwe kahle imoto yokuvikelwa kwempahla enamandla kakhulu emhlabeni wonke. The Cook Islands Ithemba libonise ukunikeza umlando womthetho we-case law yokuvikela wefa eliqine kakhulu. Kuyinto okungcono kwamandla ukuvikelwa kwempahla ngombono wethu. Ake sithi inkantolo yendawo ifuna kukhokhwe. Khumbula, inkampani ethembekile e-Cook Islands, engaphandle komthetho wenkantolo yangakini. Ngakho-ke, umphathi ophethe (okuvame ukuba yinkampani yethu yezomthetho phesheya) akabophekile ukuthobela umyalo wenkantolo. Ngenxa yalokho, i ilayisensi, iboshwe, i-insured Unyaka we-30 + ethemba inkampani igcina izimpahla zakho zingekho ngendlela eyingozi. Ukuze uthole ukuthula kwekhasimende-ye-ingqondo esiyakhayo inkampani yesikweletu esiphezulu se-offshore (LLC) okuyi-100% ephethwe yi-trust. The iklayenti ngumphathi we-LLC.
The ama-akhawunti agcinwe ku-LLC ebhange eliphephile kakhulu emhlabeni jikelele. Iklayenti lisayina kuwo wonke ama-akhawunti asebhange. Lapho kwenzeka “into embi” futhi izimpahla zingabanjwa izinkantolo. Ngakho-ke, umphathi ophethe angangena njengomphathi we-LLC. Okusho ukuthi, benza lokho okhokhele inkampani ethembekile ukuthi ikwenze - vikela impahla yakho. Lapho usongo lomthetho luphela, iklayenti libuyiselwa njengomphathi we-LLC nezimpahla zisaqhubeka. Ucwaningo lwethu lukhombisile ukuthi ukuthembeka okuhlelwe kahle kweCook Islands kuvikele impahla yamakhasimende kuzo zonke izinselelo zomthetho.
I-Offshore Trust vs Traditional Trust
An ukwethenjwa kwe-offshore kufana nokuthembela kwendabuko. Ngakho-ke, kunobudlelwano noma ilungiselelo phakathi kwalawa maqembu alandelayo: ama- “Trustee (s),” “Settlor (s),” kanye ne- “Beneficiary (ies).” Izinhlinzeko zenziwa ngombhalo obophayo obhaliwe. Lokhu sikubiza ngokuthi “I-Trust Deed.” Leli thuluzi elisemthethweni lingabamba isihloko nezimpahla nomhlaba. Ingaphatha amafa ashiwo ngokuya ngetayitimenti ethembekile. Futhi, kunganikeza uchungechunge lwezinzuzo nokusatshalaliswa kumuntu noma iqembu labantu. Ama-trust athembisa laba bantu njengabazuzi. Nawu umehluko. Ake sithi ijaji endaweni ethile lifuna ukuthi imali iguqulwe. Ngenhlanhla yakho, umphathi wethrasti (ihhovisi lethu lezomthetho phesheya kwezilwandle) akaphoqelekile ukuthi alithobele.
Umphathi we-trustee kanye / noma inkampani yetrasti ephethwe ngokuphathwa kwe-trust. Baboshwe ngumsebenzi obalulekile wokuxhasa isivumelwano. Ngokusayina idokhumenti bavumelana nemithetho kanye nezidingo ezibekwe ngethemu yetrasti. Ukwethenjwa akufani nenkampani noma isisekelo. Lolu hlobo lokuthembela luyisivumelwano esibhaliwe. Icacisa ukuthi abaphathi ukuhlinzekela abazuzi kanye nokuvikela izimpahla ezivela ezidleni.
Ukuthatha isinqumo sokwenza i-Offshore Asset Protection Trust
Okokuqala, umxazululi uthathe isinqumo sokukhetha ukwethenjwa. Ngemuva kwaloko, umuntfu longetiwe kufanele akhetse luhlobo lwekwetsemba afisa kulwakha. Lokhu kufaka phakathi isikhathi sayo, esingaba khona njalo. Indawo yokuhlala (futhi ngosizo lwethu) izokwenza izinqumo ezibalulekile ekuchazeni imininingwane. Le mininingwane ifaka phakathi kokunquma ukuthi ngabe ukuthembeka kuyabuyiselwa yini noma cha. Kubandakanya ukuthi ngabe i-trust izoba nokuqonda noma cha. Ngaphezu kwalokho, izocacisa amalungelo, imisebenzi, izibopho, kanye nokulindelwe ngumphathi.
Manje ake sibhekane nomqondo wokuphinda ubuyiselwe noma ongenakuphikwa. Njengoba amagama abo asho, ukwethembana okungabuyiselwa kungabanjiswa nganoma isiphi isikhathi ngemigomo yalokhu echazwe yisixazululo. Ngenye indlela, angaba nesikhathi sokuphila esimiselwe ngaphambili (noma angahlala unomphela) ngaphandle kokuhlinzekelwa ukuphindiselwa. Lokho wukuthi, ingahle noma ingaqedi ngokuya ngemibandela yokudalwa kwayo njengoba kuchaziwe etayilini lethemba.
Ngokuphikisana nalokho, ukuthembela okubonayo kungawela ngaphansi kwanoma yisiphi isigaba, futhi kuchazwa njengokwethenjwa ngokuguquguquka okuningi okwakhelwe ngaphakathi maqondana nokuthi umphathi ophethe abelana kanjani nokusizakala kulabo abazuzayo, futhi aze ahlinzeke, kwezinye izikhathi, umkhapheli ophethe amalungelo okuqokwa noma engeza abazuzi Lokhu kukhulula igunya eliningi ngaphezulu kwe ukwethenjwa kwe-offshore kubaphatheli, kepha, futhi kugcizelela ukubaluleka kokukhethwa ngokucophelela kwenkampani efanelekile, ephethe kahle idumela noma inkampani ebamba kahle enezethenjwa ezinhle, idumela elifanele, nesipiliyoni esidingekayo ukuze sigcwalise ngempumelelo nangokuthembeka futhi sihloniphe imigomo yetrasti .
Izinzuzo ze-Offshore Trust
Ukubekwa kwezimpahla kanye nesihloko sempahla esethembisini yilapho isabelo sezingonyama semfihlo nokuvikelwa ezinkambisweni zomthwalo wemfanelo se-trust e-offshore zigcinwe. Ngenkathi isihloko sezomthetho sidlulela kumphathiswa, okumele ufeze izibopho ezibekiwe ku-trust. Inhloso yethemba ukuhlinzekela abazuzi, okuzohlala kuyo, futhi ngokuvamile, umhlanganyeli odweliswe. Laba bazuzi, banamalungelo aqinile kakhulu ngokuphathelene nezithakazelo ezithembekile futhi eziningi zezomthetho ziyaqaphela ukuthi i Inhloso ukuhlinzeka ngezinzuzo, njengoba kuchazwe kwisenzo sokwethenjwa, kulaba bazuzi futhi lawula kahle ekuqondiseni kwabo lapho imibuzo ephathelene nokuphathwa kwe-trust itholakala.
Ngenxa yokuthi lezi zithemba zase-offshore zivame ukutholakala endaweni yokukhokha intela noma iziphathimandla zezokuvikela nge-a idumela lokulondolozwa kwezimpahla kanye nemfihlo eyimfihlo, ukwethenjwa kwe-offshore nakho kuzuza kulezi zici. Amafa aphethwe ngaphakathi kwamathenda ase-offshore ayingxenye enkulu ngaphandle kwemithwalo yezomthetho ehluphayo ngezinye izikhathi esebenza ezweni elihlala ekhaya noma ngaphansi kwegunya. Uma ithemba lithelwe ukuhlelela inzuzo yalowo owadala i-trust kanye / noma abashadile, izingane noma ezinye izindlalifa zokuhlala, ngokwesibonelo, ukwethemba kwe-offshore zinganikeza indawo yokuphuma lapho kuhlolwa ifa elinamandla. Kubantu base-US ukwethenjwa kwempahla yolwandle kuvame ukungathathi hlangothi. Lokhu, akukhuphuki noma kunciphise izintela zakho.
Ngaphezu kwalokho, ngokusekelwe ekubunjweni kwabo ezindaweni zokuphepha eziphephile zokuvikela impahla, izinkokhelo ze-offshore zinikeza imfihlo engalinganiselwe, ukuvikelwa okukhudlwana emiphakathini yemigomo yezomthetho kanye nokuzibophezela, ngisho nasezintweni ezifana nokuhlukaniswa noma ukuhlukana kwebhizinisi. Zibuye zisetshenziswe ngabaningi ukuvikelwa kwezimpahla lapho kwenzeka ukuhlukunyezwa kwezepolitiki noma ezomnotho Kuyinkimbinkimbi kakhulu, gcina ezimweni zokumangalelwa kwecala lobugebengu obukhulu, ukuze inhlangano yangaphandle ibambe isihlangu semfihlo esivela ekuthembeni kwe-offshore ezindaweni eziningi.
Ukuthi Uzokwakha Ithemba le-Offshore
Ama-trust ase-Offshore avame ukwakhiwa kumanani entela ephansi noma indawo ephephile yempahla enedumela eliqinisekisiwe lokuphathwa ngempumelelo nokuphathwa kwemali yetrasti nezimali ezethembekile. Kodwa-ke, akudingekile ngokuphelele ukuthi indawo efanelekile ibe yindawo yentela noma ibe nemithetho ekhokhwayo - iningi lezimpumelelo zokwenziwa kokuthembela namazwe anikeza nje izinkampani ezidumile, ezinolwazi ezihlangene nobumfihlo obukhulu nezihlangu ezinkulu zempahla.
Enye into esetshenziswayo yukuthi le mithetho isekela imithethonqubo nemigomo yokuthembela kumthetho ojwayelekile waseNgilandi-lokhu ngoba wona kanye umbono wokwakhiwa kwethenjwa uwumbono wakudala waseNgilandi owenzeka emuva esikhathini seZimpi Zenkolo. Ezinye izinkantolo zaseYurophu ezinikezela ukuphathwa kwe-trust okuphumelelayo, njengeLuxembourg, iMalta, iSwitzerland, njll., Zivumelanise imithetho nemigomo yazo ukuze ihambisane nemodeli efanelekile yokuphatha ebekwe yilabo esekwe emthethweni ojwayelekile waseNgilandi. Iziphathimandla ezime ngaphezu kwazo zonke ngokwemigomo yokuvikelwa kwempahla yi-Cook Islands, the I-Nevis ithemba kanye neBelize, ngaleyo ndlela.
Ukwakhiwa kwethempelini ye-offshore kudinga ukuhlolwa okuyiqiniso kwemigomo kanye nenhloso yokuxazululwa okungenzeka, futhi kuzothatha ezinye izinsiza ekumisweni nasekugcinweni kwayo. Ngakho-ke, ucwaningo olunzulu, oluzibophezelekile, futhi iseluleko kanye nosizo oluvela kuma-agent abanolwazi nangolwazi kuyadingeka.
Ukwakha i-offshore trust inikeza ukuvikelwa okukhulu kwezimpahla ezivela ekuhlolisweni okungaqondwanga, ukuphikisana, nokuxabana komphakathi. Kumele kubonakale ukuthi ngenkathi izindleko zokwakheka nokugcinwa kwesondlo zingacatshangwa, ukusungulwa kwe-a ukwethenjwa kwe-offshore kuzohlinzeka ukuthula okuhle kwengqondo kulabo abafuna ukuvikela izimpahla zabo ezinkulu noma ukuhlinzeka izingane zabo esikhathini eside.